Man or Vampire 1.5.5 Android အတြက္ Aptoide APK အား ေဒါင္းလုပ္ ျပဳလုပ္ပါ
ဗားရွင္း 1.5.5 လြန္ခဲ့ေသာ 1 လက
ဂိမ္းမ်ား တကိုယ္ေတာ္ Man or Vampire
Man or Vampire ၏ ေဖာ္ျပခ်က္
Paradise:amysterious world where dead souls gathers. Now that the end of the paradise is imminent because of the vampires who were ruling the frontiers, only the king of the paradise can save it from the crisis. Now, an adventure is to become the king of the paradise begins.
Your own creative strategic battle by using the terrains in turn-based battles. The battles are carried out inaparty-play basis, and the aspects of the battle will change depending on the positions and terrains of the party that you have configured. In addition, skills of your companions are the main factor that affects in the battle.
● Suspicious Dungeon Progress
Man or Vampire contains various dungeons that are created randomly. Map exploration is essential in order to escapeadungeon. Beware of the dungeon boss, that appears out of nowhere and threaten you from escaping. Don’t worry, items and equipment will help you progress throughout the dungeon.
● Recruit Companions with Various Skills
Recruit your companions who will go on an adventure with you. Different in skills and classes that create uniqueness from each character. You can train your companions to become stronger through various contents that include affinity, monster element, party research, etc.
● Develop Main Character
Grow your Champion. Our main character is special, that states as both human and vampire. You can change job whenever you want, and learn advanced skills from your companions. You can enjoy the game in various ways depending on how you utilize your main character.
#Top10: Google Indie Game Festival 2017
#Invited to: MWU Festival 2017
#Ranked 2: Game Creation Audition 2017
Thank you from the bottom of our hearts to everyone who loves Man or Vampire!
Your precious reviews help us to develop the game.
[Storage Space Permission (Required)] - This permission is needed to install the game and save the game data.
[Audio and Camera Access (Required)] - This permission is necessary to use the game recording & image attachment features in the Naver Cafe function.
- OS 6.0 or later: Settings> Application Manager> Select app> Permissions > Revoke Access Permissions
- Below O.S 6.0: Cannot revoke access permissions, so you have to delete the app altogether to revoke access.
ပရဒိသု: သေပြီအသက်ဝိညာဉ်ကိုစုသိမ်းတဲ့လျှို့ဝှက်ဆန်းကြယ်ကမ္ဘာကြီးကို။ ယခုပရဒိသု၏အဆုံးဖြစ်သောကြောင့်နယ်စပ်အာဏာရခဲ့ကြသူ Vampire ၏အံ့ဆဲဆဲကြောင်းကို, အပရဒိသုသာရှင်ဘုရင်အကျပ်အတည်းကနေကယ်တင်နိုင်ပါ။ အခုတော့တစ်ဦးစွန့်စားမှုကစတင်ခဲ့သည်ပရဒိသုရှင်ဘုရင်၏အဖြစ်လာဖို့ဖြစ်ပါတယ်။
အလှည့်-based တိုက်ပွဲများအတွင်းအနေအထား အသုံးပြု. သင့်ကိုယ်ပိုင်ဖန်တီးမှုမဟာဗျူဟာမြောက်စစ်တိုက်။ အဆိုပါတိုက်ပွဲများပါတီ-ကစားအခြေခံထွက်သယ်ဆောင်ကြသည်ကို၎င်း, စစ်တိုက်ရာရှုထောင့်ကိုသင် configured သောပါတီများ၏ရာထူးများနှင့်အနေအထားများပေါ် မူတည်. ပြောင်းလဲသွားပါလိမ့်မယ်။ ထို့အပြင်သင်၏အပေါင်းအဘော်များ၏ကျွမ်းကျင်မှုစစ်တိုက်ရာတွင်အကျိုးသက်ရောက်သောအဓိကအချက်တစ်ချက်ရှိပါတယ်။
က Man သို့မဟုတ် Vampire ကျပန်းဖန်တီးဖြစ်ကြောင်းအမျိုးမျိုးသောထောင်ထဲပါရှိသည်။ မြေပုံတူးဖော်ရေးတစ်ဦးသည်ထောင်ထဲမှလွတ်မြောက်ရန်အလို့ငှာမရှိမဖြစ်အရေးပါသည်။ ဘယ်နေရာမှာမှထွက်ပေါ်လာသောထောင်ထဲသူဌေး, သတိပြုပါနှင့်ထွက်ပြေးလာသူထံမှသင်တို့ကိုခြိမ်းခြောက်။ ပစ္စည်းများနှင့်ကိရိယာများကိုသင်ထောင်ထဲတလျှောက်လုံးတိုးကူညီပေးပါမည်, မစိုးရိမ်ပါနဲ့။
သင်နှင့်အတူတစ်ဦးစွန့်စားမှုပေါ်သွားပါလိမ့်မယ်တော်မူသောသင်တို့အပေါင်းအဘော်စုဆောင်း။ တစ်ခုချင်းစီကိုဇာတ်ကောင်အနေဖြင့်ထူးခြားမှုဖန်တီးကြောင်းကျွမ်းကျင်မှုနှင့်အတန်းထဲတွင်ကွဲပြားခြားနားသော။ သငျသညျဆှဖှေဲ့, နဂါးဒြပ်စင်, ပါတီသုတေသန, etc တို့ပါဝင်သည်ကြောင်းအမျိုးမျိုးသောအကြောင်းအရာများကိုတဆင့်ပိုမိုအားကောင်းဖြစ်လာဖို့သင့်အပေါင်းအဘော်လေ့ကျင့်နိုင်ပါတယ်
●ပင်မက Character ထုတ်လုပ်မည်
သင့်ရဲ့ချန်ပီယံမပေါက်ပါဘူး။ ကျွန်ုပ်တို့၏အဓိကဇာတ်ကောင်လူ့ခြင်းနှင့်သွေးစုပ်ဖုတ်ကောင်နှစ်ဦးစလုံးအဖြစ်ကဤသို့ဆိုကြောင်း, အထူးဖြစ်ပါတယ်။ သင်ချင်တယ်အခါတိုင်းအလုပ်တစ်ခုကိုပြောင်းလဲရန်, သင်၏အပေါင်းအဘော်ကနေအဆင့်မြင့်ကျွမ်းကျင်မှုသင်ယူနိုင်ပါတယ်။ သင်အဓိကဇာတ်ကောင်အသုံးချပုံကိုပေါ် မူတည်. အမျိုးမျိုးသောနည်းလမ်းတွေနဲ့ဂိမ်းကိုခံစားနိုင်ပါတယ်။
# Top10: Google ကအင်ဒီဂိမ်းပွဲတော် 2017
MWU ပွဲတော် 2017: မှ #Invited
#Ranked 2: ဂိမ်းဖန်ဆင်းခြင်းစာရင်းစစ် 2017
က Man သို့မဟုတ် Vampire ချစ်သောသူလူတိုင်းငါတို့စိတ်နှလုံးကို၏အောက်ခြေကနေ Thank you!
●မသင်မနေရ Access ကိုခွင့်ပြုချက်များလမ်းညွှန်
[သိုလှောင် Space ကိုခွင့်ပြုချက် (လိုအပ်ပါသည်)] - ဤခွင့်ပြုချက်ဂိမ်းတပ်ဆင်ရန်နှင့်ဂိမ်းဒေတာသိမ်းဆည်းဖို့လိုအပ်ပါသည်။
[အော်ဒီယိုနှင့်ကင်မရာ Access ကို (လိုအပ်သည်)] - ဒီခွင့်ပြုချက် Naver ကဖေး function ကိုအတွက်ဂိမ်းမှတ်တမ်းတင် & image ကိုပူးတွဲမှုအင်္ဂါရပ်တွေကိုအသုံးပြုရန်လိုအပ်ပါသည်။
# access ကိုပြန်ရုပ်သိမ်းဖို့ကိုဘယ်လို
- OS ကို 6.0 သို့မဟုတ်နောက်ပိုင်း: Setting> Application ကို Manager ကို> Select လုပ်ပါ app ကို> ခွင့်ပြုချက်များ> ပြန်ရုပ်သိမ်း Access ကိုခွင့်ပြုချက်များ
- O.S 6.0 အောက်တွင်: သင် access ကိုပြန်ရုပ်သိမ်းဖို့လုံးဝ app ကိုဖျက်ပစ်ရန်ရှိသည်ဒါ access ကိုခွင့်ပြုချက်ပြန်ရုပ်သိမ်းလို့မရပါ။
Man or Vampire အတြက္ အသံုးျပဳသူ အဆင့္သတ္မွတ္ခ်က္မ်ား
Man or Vampire အေပၚ ျပန္လည္စစ္ေဆးမႈမ်ား
Man or Vampire အေပၚတြင္ ျပန္လည္ စစ္ေဆးမႈ မရွိပါ။ ပထမဆံုး ျပဳလုပ္လိုက္ပါ!
Man or Vampire အား အခ်က္ျပပါ
kryss974 စတိုး 3.87k 881.91k
Man or Vampire ႏွင့္ အလားတူေသာ အက္ပ္မ်ားကို ေဒါင္းလုဒ္ဆြဲပါ
APK အေၾကာင္း Man or Vampire အခ်က္အလက္
APK ဗားရွင္း 1.5.5
App Name: Man or Vampire
File Size: 78.73MB
Release date: 2019-01-23 15:03:28
လက်မှတ် SHA1: 50:34:A8:2B:C6:F8:04:E0:84:DB:4E:0B:DC:C5:97:69:69:6C:3F:30
အဖွဲ့အစည်း (O): hidea
Man or Vampire APK ကိုေဒါင္းလုဒ္ဆြဲပါ